YİD Projelerinde Yolcu Garantileri Kamuyu 65 Milyon Dolar Zarar Ettirdi – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulKhasaaraha Milyan ee 65 Milyan ee Doolar ee Ballanqaadyada Dadweynaha ee Mashaariicda BOT
06 / 11 / 2019 34 Istanbul, GUUD, Garoomada, WADADA, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
Xaqiijinta rakaabka ee mashaariicda YID ayaa sababay in dadweynaha ay waayaan hal milyan oo doollar
Damaanad-qaadyada Rakaabka ee Mashruucyada BOT Ayaa Dadweynaha Lumiyay Xilli Xilli Million Doolar; Agaasinka Guud ee Maamulka Duulista Hawada ee Gobolka (DHMI) ayaa ku dhawaaqay in luminta dammaanadihii rakaabka ee la siiyay mashruucyada lagu wareejinayo-wareejinta ay tahay 65 milyan oo doolar.
65 milyan oo doolar oo ka mid ah khasaaraha rakaabka ee ay sababiyeen mashruucyada Dhisida-Ku-wareejinta ayaa si guud loo dhaawacay Agaasinka Guud ee Maamulka Madaarada Gobolka, 3. Qandaraaska madaarka, 4 bilyan 590 milyan oo khasaare dadweyne ayaa dhacay oo qaddarkan si cadaalad darro ah loogu wareejiyay shirkadaha wax soo saare kama jawaabin.
universalSida warku sheegayo; Ka dib diidmada ay u sameysay hay'adda CHP ee ku saabsan warbixinnada shirkadaha ganacsi ee gobolka (SEEs) sanadihii 2011-2016, Agaasinka Guud ee Maamulka Duulista Hawada ee Gobolka (DHMİ) ayaa qoraal jawaab ah u diray guddiga. Waxaa la sheegay in 65 milyan oo doolar ay tahay luminta dadweynaha ee dammaanadaha rakaabka ee la siiyay iyada oo ay ugu wacan tahay mashruucyada-ku-wareejinta-wareejinta. Jawaabta, “443 milyan oo doolar ayaa lasiiyay maamulkeena ilaa hada xaqiijinta rakaabka ee lasiiyay mashruucyada wareejinta-ku wareejinta ee ay xaqiiqsadeen ururkeena ilaa iyo 65 milyan oo lacag bixin ah ayaa lasameeyay waaxda gaarka ah sababtuna waa sicirbararka sub-garanlis kullanıl.
SHARCIGA KHUDBADAHA LAGU SAMEEYO LAGU SAMEEYO
Iyada oo laga jawaabayo diidmadan Agaasimaha Guud ee DHMİ, X 42 waa wejiga koowaad ee mashruuca oo socon doona bilo. maalgashiga wejiga 1 bilyan 4 milyan oo yuuro iyo maalgalintan; Bangiga waxaa maalgaliya Bangiga 800, seddex ka mid ah waa kuwa gobolka halka seddexda kale ay yihiin bangiyo gaar loo leeyahay. Ma jiro dammaanad maaliyad khasnad deyn ah oo loogu talagalay mashruuca. Intaa waxaa u dheer, ma jiro ballanqaad ku saabsan khasnadda mashruucan. Deynta ayaa la qaatay; Haddii ay dhacdo in xarunta ay la wareegaan maamulka lacag la’aan. Si kastaba ha noqotee, marka la hawlgalayo xarunta, dhammaan dakhliyada garoonka ayaa loo wareejin doonaa maamulka, marka ay dhacdo in shacabka aysan wajihi doonin culeys deyn ah. ”
CHP's 3. Itiraz Bixinta qandaraaslaha dammaanad dakhli ee hay'addu waxay ka dhigan tahay in dhammaan halista mashruuca ay sidoo kale fulinayaan dadweynuhu. Dammaanad qaadka dakhliga ee ay bixiso DHMİ iyo amaahda laga helo bangiyada dawladda ayaa runtii ah nooca deynta dowladeed ee faafisa muddada dhexe iyo muddada dheer. Si kale haddii loo dhigo, waxaan wajahaynaa culays badan oo deyn ah oo aan ka muuqan waraaqaha dheelitirka dawladda ”.
MA OGOLAANSHO FURAHA LACAGAHA GUUD
Gudoomiye kuxigeenka kooxda 'CHP Group' Özgür Özel wuxuu sheegay in yanıt Markii laga jawaabayo diidmadeenna, dhibaatooyinka halista ah ee ka muuqda warbixinnada TCA aan laga jawaabin. Maamulka wuxuu si cad isku dayayaa inuu shacabka ku khiyaaneeyo jawaabihiisa. 3. sida curdan tahay garoonka diyaaradaha, waayo, mid curdan ah oo ka kooban waxyeello dadweynaha halis u dhiganta boqolkiiba 5 ee miisaaniyadda Turkey ee 4 billion 590 million euros in dhaawac dadweynaha ka dhacay iyo lacagta gaare iyo ku fikiray-xanaajin ku fashilmeen in ay jawaab ku saabsan transposition sida cadaalad darro in shirkadaha. 2 bilyan 90 milyan oo Yuuro, iyo 2.5 bilyan oo euro oo ah khasaaraha dadweynaha sababa la xiriira isbeddelada ka soo horjeeda tilmaamaha gaarka ah ee kor u qaadista maddaarka iyo goobaha orodka. Way iska cadahay dambiga ah sida 'jahwareerka waxqabadka inuu sameeyo ficil celinta' Performance belirtilen ee lagu xusay maqaalka. Marka laga soo tago natiijooyinkaan, xaqiiqda ah in TCA aysan soo gudbin cabasho dambi waxay ka dhigan tahay dambiga ku xadgudubka xafiiska ee Madaxweynaha iyo saraakiisha TCA. ” Özel, “Xisbiga Dadka Jamhuuriga ah 236. garoonka diyaaradaha iyo mashruucyada wareejinta-ku-wareejinta. Gaar ahaan mashaariicda lagu muujiyey iskaashi dowladeed iyo mid gaar ahaaneed sanadihii la soo dhaafay, xisbiga talada haya ayaa dadaal ugu jira sidii uu u daryeeli lahaa shirkadaha qaar ee hoos imaada iyaga oo ku dayacaya waxyeelada shacabka.
“4.5 Bilyan Euro EURO WAA AY U BADBAADI KARTAA Shirkadaha”
Gudoomiye ku xigeenka CHP Aykut Erdoğdu, 3. lagu eedeeyay wax isdaba marin ee garoonka dhexdiisa. Erdoğdu wuxuu yiri: yer 2 lama keenin waqtiga. Yapılarak 90 bilyan oo Yuuro, kor u qaadista garoonka diyaaradaha iyo garoonnada orodka ayaa la beddelay iyada oo la isbarbar dhigayo tilmaamaha qandaraaska, taasoo keentay khasaare dhan 2.5 bilyan 4 milyan oo yuuro (590 bilyan oo euro), oo ay ku jiraan bilyannada 32 bilyan euro, iyo wareejinta aan caddaalad ahayn ee qaddarkaan shirkadaha soosaarayaasha. ”
AATPK AATPORT waxay ku soo beegmaysaa xaalad nolol xumo leh
Özel, “Agaasinka guud ee DHMI ee jawaabaha in la fahmay in awoodda, 3. Iyada oo la furi doono garoonka diyaaradaha illaa saacadaha duulimaadka awoodda xNUMX, soo bixitaanka 5 waxaa loo qaabeeyey sida garoonka diyaaradaha ee Istanbul Ataturk howlaha aan ka aheyn safarka rakaabka waxay u badan tahay inay kireysan doonaan mashruuc PPP ah. Muujinta in tan lagu qiimeeyay jawaabta loo diray waxay sii kordhineysaa suurta galnimada. Waxaa la fahamsan yahay in dowladdu aysan ka tanaasuli doonin hirgelinta barnaamijka iskaashiga ah (PPP), kaasoo culeys weyn saaray shacabka iyo gaar ahaan isbitaalada guud iyo wadooyinka waaweyn, waxayna sii wadi doonaan inay daryeelaan shirkadahooda u gaarka ah Kul.
KIT Isuduwaha kulanka maanta
Kooxda CHP waxay wakiil ka tahay gudoomiye ku xigeenka kooxda Ozgur Ozel rafcaan, Gudiga SOE, qaar ka mid ah SEEs si ay ugala hadlaan warbixinada udhaxeeya 2011-2016 maanta (6 November talaado) si ay ula kulmaan. Madaxweyne kuxigeenka kooxda CHP Ozgur Ozel 2011-2016 sanadood by warbixinada SEE ee ku saabsan diidmada wadahadalada 6-7 waxaa lagu qaban doonaa November KIT komishanka. Sida laga soo xigtay Garoomada Gobolka Management General Directorate, General Directorate of Tea Enterprises, Ataturk Forest Farm Agaasinka, Turkey Radio iyo Television Corporation, Maamulka Guriyeynta Mass iyo Maamulka Tareennada Turkish Gobolka dhigay warbixinta ee Agaasinka Guud ee diidmo laga wada hadli doono.
Maanta Taariikhda: 17 May 1972 Railways 991 waxay lumisay rikoor lumis ah TL million.
Shimbiraha cusub ee Konya ayaa la kulmay khasaaraha 76 million
4 malaayiin lacageed oo lumisey ESBOT illaa IZBAN
3. hindisada garoonka
Dammaanadaha Rakaabka ee Mashaariicda BOT